अहिले निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन | GNN Nepal GNN Nepal अहिले निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन | GNN Nepal
हामीले त जनतामाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरिदेउ भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका हौं र त्यहीअनुसार नै माग सम्बोधन भयो : लक्ष्मणलाल कर्ण
जसपा आधिकारिक रुपमै फुटेको हो र ?
आधिकारिक रुपमा फुटेको भए निर्वाचन आयोगले फुटेको प्रमाणपत्र दिइहाल्थ्यो नि ।
प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भइरहने भेटघाट र छलफलहरुको निष्कर्ष के हो ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पहिले हाम्रा माग पूरा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौं । यो राज्यबाट हामी पटकपटक ठगिएका छौं । तपाईहरुले हामीलाई दिएको चेक बाउन्स भएको छ । खातामै पैसा नभएपछि त्यो चेकको के काम ? हाम्रा माग सम्बोधन भएसम्म हामी कुनैपनि हालतमा सरकारमा सहभागी हुँदैनौ भनेर हामीले त्यो अडान लियौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि हाम्रा मागहरु क्रमश पूरा गर्दै जानुभयो । माग पूरा हुँदै गएपछि नैतिकताका आधारमा पनि हामी सरकारमा जानुपर्छ र हामी सरकारमा जान्छौं ।
कहिले जानुहुन्छ ?
सकभर हामी छिटै जाने तयारीमा छौं ।
प्रधानमन्त्रीसँग तपाईहरुको सहमति के भयो ? तपाईहरुलाई कति मन्त्रालय दिने, तपाईहरुले कति मन्त्रालय माग्नुभयो ?
हामीलाई प्रधानमन्त्रीले नै ८ मन्त्रालय र दुई राज्य मन्त्रालय दिन्छौं भन्नुभएको छ । त्यसमा कुनकुन मन्त्रालय पर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन । सरकारमा जाने नै भएपछि त्यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । हामी त्यो छलफल गरेर मात्र कुन मन्त्रालय हामीलाई उपयृक्त हुन्छ हामी त्यही मन्त्रालय लिन्छौं । मधेशकेन्द्रित दलहरुले केही समय जनताका मुद्दालाई लिएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने तर सत्तामा पुगिसकेपछि मधेशका जनतालाई उपेक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ । जनतालाई सत्ताका लागि मात्र कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने रु यो धारणालाई हामीले फेल गरिदिएका छौं । मधेशीहरु पदलोलुपतामा तल्लीन हुन्छन् । सरकारमा जान उनीहरु जहिलेपनि तयार हुन्छन् भन्ने धारणालाई हामीले विस्थापित गरिदिएका छौं । हामीले त जनतामाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरिदेउ भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका हौं र त्यहीअनुसार नै माग सम्बोधन भयो । अहिले सरकारले हामीलाई नै लक्षित गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । अर्को कुरा संविधान संशोधनका लागि पनि कमिटी बनिसकेको छ । त्यसकारण हामीले जनताका लागि काम गरेका छौं ।
जनतालाई मात्रै कति प्रयोग गर्नु ? यतिबेला त झन कोरोना महामारी छ । जनता कोरोनाबाट आक्रान्त छन् । जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा काम गर्नुपर्ने थियो । तर हामीले अहिले सत्ताकेन्द्रित राजनीति किन गरेको ? भनेर तपाईहरुलाई कुनै समय आत्मग्लानि हुँदैन ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा जहिल्यै जनता हुन्छन् । जहाँसम्म कोरोनाको सन्दर्भ छ, यो सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम नगरेको होइन । काम गरेकै छ । यतिबेला केही राजनीतिक दलहरु वैकल्पिक सरकार बनाउने दौडधुपमा छन् । देशका लागि अहिले यो आवश्यक होइन । देशका लागि त अहिले राष्ट्रिय सरकार हो । त्यतातिर लागौं । सबै मिलेपछि कोरोना महामारी पनि जितिनेछ । त्यसपछि चुनाव गरौं । लोकतन्त्रमा चुनाव अनिवार्य कुरा हो ।
महन्थ ठाकुर पक्षले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसँग मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी छ भन्ने छ । कुरा के हो ?
उहाँ र हामी बेलाबेलामा भेटघाट गर्छौ । छलफल हुन्छ । तर यही छलफललाई लिएर नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने भ्रम सिर्जना गर्नु गलत हो । यद्यपि हामीबीच आन्तरिक छलफल भने भइरहेको छ । यो असम्भव कुरा होइन ।
उपेन्द्र यादवहरुसँग तपाईहरुको औपचारिक कुराकानी हुन्छ ?
विभिन्न तहबाट कुराकानी हुने गरेको छ । तर हामी अहिले मिल्ने बाटोतिर लागेका छैनौं ।
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय ४२ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ७ को मृत्यु
देउवा र प्रचण्डबीच बहुमतको सरकार बनाउने सहमति
वैशाख ३० गते, २०७८